‘लकडाउन’ले छेक्न नसकेको यो पीडा… बालिका बेचिन छाडेनन् ! – Jagaran Nepal
‘लकडाउन’ले छेक्न नसकेको यो पीडा… बालिका बेचिन छाडेनन् !
काठमाडाैँ । आममानिसमा के विश्वास छ भने, काठमाडौं छिर्ने नाका एकदमै कडा छ । जो पायो त्यही मान्छे छिर्न सक्दैन । तर,घटनाचाहिँ के छ भने, नागढुंगा, झ्याप्लेखोलातिरको त्यही कडिकडाऊ व्यवस्थाबीच कोहलपुरबाट ल्याइएका १५ वर्षीया दुई बालिका निर्वाध रुपमा काठमाडौं छिराइए, नयाँबसपार्कमा बेचिए । अहिले बेचिएका बालिकाहरुको उद्धार र यसक्रमसँग जोडिएका व्यक्तिहरु अभियुक्तका रुपमा दण्ड प्रक्रियामा छन् ।
janaastha बाट साभार